Guqula i-Oversized 2GB OST Fayela kufayela le-PST ku-Outlook 2003 Ifomethi - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Guqula i-Oversized 2GB OST Fayela kufayela le-PST ku-Outlook 2003 Ifomethi
Ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery Ukuguqula i-Oversized 2GB OST Fayela kufayela le-PST ku-Outlook 2003 Ifomethi
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,521)
Qaphela: Kufanele ube ne-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ezifakiwe kwikhompyutha yakho ukuze usebenzise indlela ekule mhlahlandlela.
Uma wakho OST ifayela lenziwe yiMicrosoft Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi, futhi ubukhulu bayo bufinyelela noma budlule u-2GB, uzohlangana nefayela le- Ngaphezulu OST inkinga yefayela futhi ayikwazi ukusebenzisa i- OST fayela okunye. Esimweni esinjalo, ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuskena okungaphezulu OST ifayela, thola yonke idatha ekulo, bese uwagcina efayeleni le-PST elisha ngefomethi ye-Outlook 2003 unicode engenawo umkhawulo kasayizi ongu-2GB. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa i-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ukuvula ifayela elisha le-PST futhi ufinyelele kuyo yonke idatha ngaphandle kwezinkinga.
Qaphela: Ngaphambi kokuguqula ubukhulu obukhulu OST ifayela nge DataNumen Exchange Recovery, sicela uvale iMicrosoft Outlook kanye nolunye uhlelo lokusebenza olungangena noma luguqule ifayela le- OST Ifayela.
Khetha okungaphezulu OST ifayela elizoguqulwa:
Ungafaka okungaphezulu OST igama lefayela ngqo noma chofoza ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho enkulu OST ifayela elizoguqulwa kukhompyutha yendawo.
DataNumen Exchange Recovery izogcina idatha eguquliwe njengefayela elisha ngefomethi ye-Outlook PST ukuze kamuva usebenzise iMicrosoft Outlook ukuvula nokufinyelela idatha eguquliwe. Futhi ngokuzenzakalela, igama lefayela elisha le-PST lithi xxxx_recovered.pst, lapho i-xxxx yigama lomthombo omkhulu OST ifayela. Isibonelo, ngomthombo osayizi omkhulu OST Umthombo wefayela.ost, igama lefayela le-PST eliguqulwe ngokuzenzakalela lizoba yiSource_recovered.pst. Uma ukhetha ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela le-PST lokukhipha ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha igama lefayela le-PST.
Njengoba sifuna ukuguqula ubukhulu obukhulu OST fayela kufayela le-PST ngefomethi ye-Outlook 2003, engenawo umkhawulo kasayizi ongu-2GB, kufanele sisethe ifomethi yefayela le-PST elikhiphayo ku- “Outlook 2003/2007” ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela ifayela. Uma usetha ifomethi ku- "Outlook 97-2002" noma ku- "Auto Determined", lapho-ke DataNumen Exchange Recovery ingahluleka ukucubungula nokuguqula ubukhulu bakho obukhulu OST Ifayela.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi kufanele ufake i-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme, uma kungenjalo yonke inqubo yokuguqula izokwehluleka.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Exchange Recovery intando start ukuskena nokuguqula idatha kusuka kumthombo omkhulu OST fayela lapho uya khona Ifayela le-Outlook 2003 PST. Ibha yenqubekela phambili
kuzokhombisa inqubekela phambili yokuguqulwa.
Ngemuva kwenqubo yokuguqula, uma noma iyiphi idatha ingaguqulwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje usungavula ifayela eliguquliwe le-PST nge-Microsoft Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme, bese ubona idatha yoqobo OST ifayela liguqulwe laba yifayela le-PST elisha.
Qaphela: Uhlobo lwedemo luzobonisa ibhokisi lomyalezo elilandelayo ukukhombisa impumelelo yokuguqulwa:
Ngemuva kwalokho ungavula ifayela eliguquliwe le-PST nge-Microsoft Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme. Kodwa-ke, kumyalezo ngamunye oguquliwe, okuqukethwe kwawo kuzothathelwa indawo imininingwane elandelayo yedemo:
Ukuthola okuqukethwe okuguquliwe uqobo, sicela oda okufushane umnyuziki.
Guqula i-Oversized 2GB OST Fayela kufayela le-PST ku-Outlook 2003 Ifomethi
DataNumen Access Repair 3.8 ikhishwe ngoFebhuwari 23, 2021
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.5 ikhishwe ngoFebhuwari 18, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.5 ikhishwa ngoJanuwari 28, 2021